Heerka xaquuqda caruurta ee Iswiidhan oo laga hadlay. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maria Larsson, Wasiirada arrimaha caruurta iyo waayeelka. Sawirle: Gustav Larson
Heerka xaquuqda caruurta ee Iswiidhan oo laga hadlay.
La daabacay torsdag 3 november 2011 kl 16.44
Dowlada Iswiidhan ayaa maanta soo bandhigtay qorshe cad oo ay ku sheegtay in sharciga Iswiidhan uu si wanaagsan ugu soo baxay dhowrista xaquuqda caruurta ka gadaal markii dhowaantan gudiga xaquuqda caruurta ee Q.M uu sheegay in Iswiidhan aysan ugu hogaansamin sidii la rabay axdiga qaramadda midoobay ee xaqa caruurta.
’’ Sawirkan inoo soo baxay waxuu leeyahay in aan si wannagsan oo heer sare ah aan u buuxinay ilaalinta xaquuqda caruurta laakiin haddana waxaan si taxadar leh u leeyahay in aan weli ku qanacsaneyn ilaa mooyee aan hore u sii qaadno tallaabooyin heerka xaquuqda carrurta ee dalkeena waa uu liitaa, siadaasi waxaa tiri Maria Larrson oo ah wasiirka arrimaha caruurta iyo waayeelka ee dalka Iswiidhan.
Wasiirada qudheeda ayaa dooneysa in axdiga xaquuqda caruurta ee Q.M in uu qeyb ka noqdo sharciga dalka Iswiidhan.
Dhinaca kale Emma Von Corswant oo ah shaqrci yaqaan ka tirsan hayada qaramadda u qaabilsan caruurta ee Unicef ayaa sheegtay in axdiga xaquuqda caruurta ee Q.M uu yahay mid dhammeystiran oo muhiim ah aysana wanaagsaneyn in laga hoos maro.
Gudaha Iswiidhan waxaa isa soo tareysa eedeymaha dowladda loogu jeedinayo xaquuqda caruurta iyada oo xisbiyo badan, hayado dowli ah iyo ururo ay taageersanyihiin fekerka ah in Iswiidhan ay sharcigeeda ku darto axdiga Q.M ee ilaalinta xaquuqda caruurta.
Maanta caruurta aan aheyn Iswidhishka ee haddana lagu tacadiyo ayaa laga msaafurin karaa dalka.
Qorshaha sharaxaada ee maanta la soo bandhigay ayay wasiirada arrimaha dhallaanka iyo waayeelka waxay ku tilmaamtay tallabo hore loogu qaaday dhinaca jihada saxa ah iyadoona sheegtay in ay rajeyneyso mustaqbalka in xisbiyada talada haya ee isbaheysiga in ay dooda ka yeeshaan arrintan waaxana doodahaasi qeyb ka ah kuwala qorsheeyay 10-ka bisha oo hayadaha u dooda xaqa dhallaanka iyo hayadaha dowlada ay aragti ka dhiiban doonaan natiijada qorshaha maanta la soo bandhigay.